Luyini Uhlelo Lokulawulwa Kwenkontileka? Zidume Kangakanani? | Martech Zone
Luyini Uhlelo Lokulawulwa Kwenkontileka? Zidume Kangakanani?
NgoLwesibili, Agasti 15, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Emnyakeni wesithathu waminyaka yonke weSpringCM Isimo Sokuphathwa Kwenkontileka, babika ukuthi bangu-32% kuphela abaphendulile ocwaningweni abasebenzisa ikhambi lokuphathwa kwenkontileka, lenyuke ngo-6% kunangonyaka odlule.
Izinhlelo Zokulawulwa Kwenkontileka hlinzeka inhlangano ngezindlela zokubhala ngokuphepha noma ukulayisha izinkontileka, ukusabalalisa izinkontileka, ukuqapha umsebenzi, ukuphatha ukuhlela, ukwenza inqubo yokuvunyelwa, kanye nezibalo zezinkontileka ezihlanganisiwe zokubika.
Akumangazi, kepha kuyethusa ukuthi iningi lezinkampani lithumela izinkontileka nge-imeyili. Eqinisweni, iSpring CM ibika ukuthi izinkampani ezingaphezu kwama-85% zisanamathisela izinkontileka kuma-imeyili. Ama-60% wabaphenduli bocwaningo bathi baphatha yonke inqubo yenkontileka nge-imeyili. Lokhu kuyinkinga ngezizathu ezimbili:
I-imeyili ithi hhayi indlela yokuthutha ephephile. Amafayela angakhonjwa futhi alandwe kalula ngama-node wenethiwekhi abhekiwe noma yikuphi phakathi kwabamukeli ngabaduni.
Izinhlangano zinokuningi kude noma amandla okuthengisa ahambayo, okusho ukuthi bavame ukusebenza ngokungavikeleki, amanethiwekhi avulekile angabhekelwa ukuphepha kepha angaqashwa abanye.
Ezinhlanganweni ezisebenzisa ipulatifomu yokuphathwa kwenkontileka, cishe eyodwa kwezine (22%) zithi ingozi yokunciphisa kwaba yinto eza kuqala kubo. Futhi ngenkathi izinhlangano eziningi zenza izinyathelo ezizenzakalelayo ezinkambisweni zazo zenkontileka, eziningi zisabhekene nenkinga yezinkontileka ezenziwa ngesandla, ezingavikelekile. Ukuzenzakalela kokuhamba komsebenzi kuyo yonke inqubo yokuphathwa kwenkontileka kuveza ithuba elibonakalayo lomjikelezo wokuthengisa osebenza kahle, futhi kuqede izinselelo nobungozi obuhambisana nokugeleza komsebenzi okwenziwa ngesandla. Amabhizinisi akhetha ngempumelelo futhi asebenzise izixazululo zokuphatha izinkontileka kungenzeka ukuthi athole imali ekhuphukile kanye namaphutha ambalwa ahlobene nenkontileka.
Izinkontileka zingumgogodla wezinhlangano eziningi, kepha amadili avamise ukuma lapho efika esigabeni senkontileka. Kungakho sicwaninga izinselelo ezihambisana nenqubo yokuphathwa kwezinkontileka. Inhloso yethu yalolu cwaningo ukuhlinzeka abenza izinqumo ngemininingwane engasebenza ukuze bathuthukise izinqubo zabo zokuphatha izinkontileka. UWill Wiegler, iphini likamongameli omkhulu kanye ne-CMO e-SpringCM
Umbiko ogcwele wembula ukuqonda kokwamukelwa kobuchwepheshe ngaphakathi kwenqubo yokuphathwa kwezinkontileka kanye nemiphumela yokusebenzisa uhlelo lokuphathwa kwezinkontileka. Ngikufake ukukhishwa okungezansi ukuthola eminye imininingwane.
Landa Isimo Sokuphathwa Kwenkontileka
I-SpringCM isiza ukugeleza komsebenzi ngokuletha ukuphathwa kwamadokhumenti amasha kanye neplatifomu yokuhamba komsebenzi, okunikeza amandla okuhola ukuphathwa kwenkontileka yokuphila (CLM) isicelo. ISpringCM inika amandla izinkampani ukuthi zikhiqize kakhulu ngokunciphisa isikhathi esichithwa ukuphatha imibhalo ebalulekile yebhizinisi. Ukugeleza kokusebenza okuhlakaniphile, okuzenzakalelayo kunika amandla ukusebenzisana kwedokhumenti kuyo yonke inhlangano kusuka kunoma iyiphi ideskithophu noma idivayisi yeselula. Kuthunyelwe ngeplatifomu yamafu ephephile, engashabalali, idokhumende ye-SpringCM kanye nezixazululo zokuphathwa kwenkontileka zihlangana ngokukhululekile ne-Salesforce, noma zisebenze njengesixazululo esizimele.
Tags: ukuphathwa kwenkontileka yokuphilaIndlela yokuphila yenkontilekaukuphathwa kwenkontilekauhlelo lokuphathwa kwenkontilekaukuhamba komsebenzi kokuphatha inkontilekaintwasahloboisimo sokuphathwa kwenkontileka